“Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin’ny tany no hitondrantsika ny endik’ilay any an-danitra koa… Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana.” 1 Korintiana 15:49;53
Ny fanday dia mihidy ao anatin’ny akora miaro azy. Mety hihevitra isika hoe vatapatiny io. Tsy izany velively nefa! Zavatra saro-pantarina no mitranga, fa ho levona ny tenan’ilay zavamanana aina kely, ary avy eo dia lolo tsara tarehy no hisolo ilay akora maty.
Fiovana maro mahatalanjona! Ilay bibikely nandady dia hanidina ankehitriny. Favinkazao no nohaniny taloha, fa izao izy mitsentsitra mamim-binikazo. Tsy nisy dikany izy fony mbola fanday, fa ankehitriny kosa nanjary anisan’ireo zava-boahary tsara tarehy.
Mitovy amin’ny an’ny fanday, ny fiainantsika eto an-tany dia toa biby anaty fasana, tahaka ilay bibikely tsy mihetsika mihidy ao anaty akorany. Nefa, tahaka ny lolo, ny mpino dia hitsangana amin’ny maty ka hitafy vatana vaovao, rehefa avy ny Tompo ary hiaraka aminy mandrakariva.
Ny Baiboly dia mampitaha ny vatana amin’ny voa natao anaty tany. “Afafy amin’ny fahalovana izy (ny tena), atsangana amin’ny tsy fahalovana; afafy amin’ny fahafam-boninahitra izy, atsangana amin’ny voninahitra; afafy amin’ny fahalemena izy; atsangana amin’ny hery” (1 Korintiana 15:42-43).
Antsoina hoe “adala” ny olona misalasala ka manotany hoe: “Hatao ahoana àry no fananganana ny maty? Ary tena (vatana) manao ahoana no hisehoany? (1 Korintiana 15:35,36). Lazain’ny Baiboly koa fa ny tsy mino dia hitsanga mba hotsaraina (Jaona 5:29; Apokalipsy 20:12).
Ndeha hianatra hamaky ny boky lehibe mitantana ny voary. Nantenain’ilay Mpahary ao, ho fampianarana antsika, amin’ny alàlan’ny sary, ny sasantsasany amin’ireo tsiambaratelony faran’izay mahazendana.